सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि पशुपालन क्षेत्रको अपरिहार्यता
नेपाल कृषि पर्यावरणीयरुपमा सम्पन्न भू–अवस्थितिमा छ । साथसाथै भएका प्रत्येक क्षेत्रमा त्यस क्षेत्रमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा समुदाय सुहाउँदो तथा आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेखालका विविधखाले पशुपालन प्रणाली प्रचलनमा छन् । यो विविधता पालिएका पशु प्रजाति, ती वंश व्यवस्था, सक्रिय प्रणाली, दाना–आहार व्यवस्थापन जुन स्थानीय वन जंगल, वनस्पती वन्यजन्तु र बजार व्यवस्थापनसँग मेल खाने छन् । मिश्रित बाली, पशुपालन तथा चरीचरनमा आधारित दुई प्रचलित कृषि प्रणाली सबैखाले कृषि पर्यावरण आञ्चलिक भूभागमा पाइन्छ । मिश्रित बाली पशुपालन प्रणालीमा कृषकले बाली तथा पशुपालनबाट आफ्नो आयआर्जन बराबरी प्राप्त गर्छन् भने अर्कोतर्फ चरीचरनमा आधारित पशुपालन प्रणालीमा भने कृषकहरु जीविकोपार्जनका मुख्य आयस्रोतका रुपमा पशुपालनमा मात्र भर पर्दछन् । जहाँ चरीचरनले वर्षको केही समयका लागि चरंगा घाँस, डाले घाँस उपलब्ध गराउँछन् । अल्पवृष्टि, कहालीलाग्दो मौसमी जलवायु परिवर्तन आदि सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रलाई दिगो बनाइराख्न कठिन पर्छ ।
नेपालमा पशुपालन गर्ने तरिका छरिएर रहेको छ । अधिकांश पशुपालक ग्रामीण क्षेत्रका सीमान्तकृत, दलित जनजाति, श्रमिक भूमिहीन छन् । यिनको विकासका लागि पशु विकास, पशु स्वास्थ्य सेवा अनुसन्धान, प्रसार, सहज वित्तीय पहुँचबारे ठोस कार्ययोजना त आवश्यक पर्छ । यी समुदायले ग्रामीण जनसंख्याको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व गर्दछन् भन्दा हुन्छ, जसले हामीलाई उल्लेखनीय रुपमा पशुजन्य उत्पादनको दिगो अनि सहज आपूर्ति गरिराखेका छन् । पशुधन यिनीहरुका लागि जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र हुँदैन, बरु यिनको सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराको प्रतीक पनि अनि ग्रामीण स्वरोजगारको माध्यम पनि बनेको हुन्छ । किनकि यिनीहरुसँग अन्य वैकल्पिक रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुँदैन ।
धेरै अध्ययन अनुसन्धानले मिश्रित कृषि पशुपालन र सीमान्तकृत कृषक समुदायलाई शुद्धीकरण गरी लैजाने हो भने गरिबी निवारणको उत्तम विकल्प हुनसक्ने देखाएका छन् । यहाँका विपरीत समुदायमा हुनेखानेहरुले पनि आप्नो पुँजी स्थिर राख्न पनि पशुपालन पेसा व्यावसायिक रुपमा उपयोग गरेको देखिन्छ । यस समुदायसँग पशुपालनका लागि चाहिने सबैखाले सेवा सुविधा उपलब्ध गर्ने क्षमता, स्रोत र साधनको सहज पहुँच पनि छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा तथा निकासीको सम्भावनालाई नियाल्दा । यस समुदायको भूमिका, यिनबाट प्राप्त हुने उपलब्धि पशुपालनको समग्र क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
सीमान्तकृत पशुपालकले व्यवसायको दिगोपनाका लागि धेरै बाधा अवरोध व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । आधुनिक पशुपालन प्रविधि, पशु स्वास्थ्य सेवासम्म यिनको पहुँच साह्रै नै न्यून छ । यो समुदायले उत्पादन गरेको पशुजन्य उत्पादनहरुको प्रशोधित अप्रशोधित मूल्य अत्यधिक न्यून छ, सर्वकालिक, सर्वव्यापीरुपमा । उदाहरणका लागि यिनले उत्पादन गरेको दूधको उपभोक्ताले अन्तिम विन्दुमा तिरेको मूल्यको ४० प्रतिशत मात्र हो । कृषिजन्य अन्य उत्पादनका उत्पादकले पाउने मूल्य पनि यसै वरिपरि हुन्छ भन्न कुनै तिथिमिति वा साइत हेर्नुपर्दैन । अर्कोतर्फ पशुपन्छी खरिद गर्न, व्यवस्थापन गर्न र आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन ऋण सेवा सुविधासम्मको यिनको पहुँच त्यति सहज छैन नै ।
राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदान सहयोगसम्म यिनको पहुँच हुँदैन । हाम्रो आफ्नो परिवेशमा यो कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । सीमान्तकृत पशुपालक कृषकले पाल्ने पशुपन्छीमा बाख्रा, संगुर बंगुर, काठे कुखुरा आदि पर्दछन् । जसको विकासका लागि चाहिने अध्ययन अनुसन्धान, प्रसार, पशु स्वास्थ्य सेवा र आवश्यक वित्तीय सेवासम्बन्धी सहयोगमा यिनको सहज पहुँच छैन । यो त यिनका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात’को स्थिति छ । हाम्रो परिवेशमा मात्र होइन, विकासशील विश्वका सबै भूभागका देशमा यही अवस्था कायम छ भन्दा फरक नहोला । कागजमा रंगीबिरंगी आयोजना/परियोजना सञ्चालन भएको देखाइए पनि वास्तविकता त्यसको ठीक विपरीत छ ।
हाम्रो आफ्नै परिवेशमा सरकारी स्तरमा सञ्चालित प्याक्ट र हिमाली आयोजना, गैरसरकारी स्तरमा सञ्चालित हेफरकै कुरा गरे पनि यिनले पाल्ने पशुपन्छीको उन्नत प्रजातिलाई सुहाउँदा कार्यक्रम पाइँदैनन् । यिनले बसोबास गरेका भौगोलिक, आञ्चलिक जलवायुकृत परिवेशअनुसारको सहज उपलब्धता जोखिमपूर्ण पर्यावरणीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने यिनीहरुसम्म उपलब्ध हुने सम्भावना न्यून रहन्छ । यिनको यो आवश्यकता परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्नेबारे कुनै कार्ययोजना वा कार्यविधिबारे नीति निर्माणकर्ता दुविधामा छन् । दाताले भन्ला भनी कुरेर कार्यक्षेत्रका हर्ताकर्ता त केही परिपत्र कुरेर बसेका छन् ।
यी सीमान्त कृषक पशुपालक समुदायले भोग्नुपरेका समस्या प्रमुखरुपमा दाना, घाँस, पराल त हो । हिजोको कर्मकाण्डी, परम्परागत तरिकाले आजको आधुनिक पशुपालनलाई भरथेग गर्न सक्दैन, यो तीतो यथार्थ हो । मूल सहर, विकसित बजार क्षेत्रवरिपरिका ग्रामीण क्षेत्रमा सहरको बढ्दो दूधको माग धान्ने उद्देश्यले पशुपालन व्यवसायको नयाँ आयाम विकसित हुँदै गरेको अवश्य छ । सहरी घेरावरिपरि गरिने पशुपालन दाना–आहारामा नै आधारित छ । यी पशुपालक कृषक व्यावसायिक चेतनायुक्त हुनेहुँदा उन्नत प्रविधि तथा उपलब्ध सेवा सुविधा तथा उत्पादन, बजारीकरण सेवा ग्रहण गर्ने क्षमता राख्दछन्, अनि सजिलै उपभोग गर्न सक्छन् । भैंसीपालन यिनको प्रमुख व्यवसाय मानिन्छ । यिनले आधुनिक प्रजनन सेवा उपभोग गरी आफ्नो पशुलाई वर्णशंकर गराई तिनको उत्पादकत्व वृद्धि गराउने गरेको पाइन्छ । सहरी उपभोक्तालाई अप्रशोधित सङ्लो दूध बिक्री गरी आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि आयआर्जन गर्दछन् यी पशुपालकहरु ।
वर्तमानमा पशुपालकका सीमित क्षेत्रमात्र व्यावसायिक प्रणालीतर्फ उन्मुख छन् । कुखुरापालन, दुग्ध व्यवसाय र केही मात्रामा बंगुर पालन भएका उदाहरणका लागि लिन सकिन्छ । एकातिर व्यावसायिक औद्योगिक प्रणालीमा उत्पादन लागत कम हुन्छ लगानीका हिसाबले तर दीर्घकालीनरुपमा सामाजिक वातावरणीय तथा जनस्वास्थ्यगत रुपमा भने बढी मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । व्यावसायिक पशुपालन प्रणालीमा खेतीपाती गरिने राम्रा जग्गामा मानवीय खाद्यान्न आपूर्ति गर्नेलाई पशुहरुका लागि आवश्यक पर्ने घाँस उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै प्राकृतिक वनजंगल चरीचरनका क्षेत्रमा बढी मात्रामा पशु संग्रहित हुँदा पशुजन्य फोहोरमैलाको चाप हुन्छ भने यसले हावा, पानी, माटो प्रदूषण गराउनुका साथै विभिन्नखाले सरुवा रोगको महामारी फैलिने जोखिम रहन्छ ।
अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा पशुजन्य उत्पादनको माग उपभोक्तामाझ अझै बढ्ने सम्भावना छ, जसको आपूर्तिको ठूलो हिस्सा व्यावसायिक पशुपालनले पूर्ति गर्छ । पुँजीको सुनिश्चितता, श्रमिकको महँगो ज्याला, लागत खर्च घट्दै जाँदा यसै क्षेत्रले बजारबाट फाइदा लिने देखिन्छ । तसर्थ साना, मझौला एवं सीमान्तकृत पशुपालकले यसमा हिस्सेदारी पाउन र यिनलाई पनि यसबाट फाइदा लिन केही नीतिगत परिवर्तन आवश्यक पर्नेछ । जसले गर्दा यिनले संगठित व्यावसायिक पशुपालनसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकून् ।
यस्तो नीतिगत परिवर्तनअन्तर्गत यी मझौला, साना, सीमान्तकृत पशुपालक कृषकलाई पशुजन्य उत्पादन, प्रशोधन उद्योगसँग सर्तसहित सम्झौता गर्दै पशुपालन प्रणालीमा आबद्ध गराई यिनको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गराउने काम अपरिहार्य छ । जुन कुरा सुढृढ अनुसन्धान तथा सर्वसुलभ पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता को सुनिश्चिताबाट सम्भव हुनसक्छ । बढ्दो सहरीकरण र दिगो सुनिश्चितताप्रति व्यक्तिको आयमा भइरहेको निरन्तरता वृद्धिले पशुजन्य उत्पादनको बजारमा माग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । पशुजन्य उत्पादपनको बृहत् माग भौगोलिक सीमा तथा सामाजिक आर्थिक परिवेशमा मात्र सीमित रहेन । पशुजन्य उत्पादनको माग व्यक्ति, समुदायको आयस्रोत स्तरअनुसार लचिलो हुनेगर्दछ । रोजगारीको अवसरका आधारमा आजका विपन्न आर्थिक स्थिति भएका पनि आम्दनी बढेपछि यसमा खर्च गर्न थाल्नेछन् । अझ हाम्रो आफ्नो परिवेशमा जाँदा अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विपे्रषणमा निर्भर छ । यसरी विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम पशुजन्य उत्पादन प्रयोग त हुने हो ।
यद्यपि दु्रतगतिमा भइरेको सहरीकरण तथा नयाँ बजार विस्तार त पशुजन्य उत्पादनको माग विस्तार गराउने प्रमुख उत्प्रेरक हो । ग्रामीण क्षेत्रभित्र नै विष्रेषण गर्दा हाम्रा ग्रामीण क्षेत्र पनि यस सन्दर्भमा पछि पर्नेछैनन् । त्यसबाहेक विश्व बजारमा पनि पशुजन्य उत्पादनको माग बढ्दो छ । जसले गर्दा स्थानीय पशुजन्य उत्पादनको माग समग्रमा बढ्दो छ । जसले गर्दा स्थानीय पशुजन्य उत्पादनलाई विश्व बजारमा निर्यात गर्ने अवसर र सम्भावना पनि प्रचुर छ । यसरी बढ्दो पशुजन्य उत्पादनको मागले यस क्षेत्रको विकासका सम्भावनाका क्षेत्र विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । पशुपालन क्षेत्र कृषिका अन्य क्षेत्रभन्दा बढी विस्तारित हुँदै छ । यो गति अझै केही समयसम्म लम्किनेछ । किनकि यो सम्भावनायुक्त छ ।
मागले डो-याएको पशुजन्य उत्पादनले यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभका कारण लाखौं ग्रामीण सीमान्तकृत समुदाय गरिबीको रेखाबाट उन्मुक्त हुनेछन् किन भने कृषिका अन्य पेसाभन्दा पशुपालनका लागि कमै जग्गा भए पुग्छ । ती खरिद सीमान्तकृत कृषकसँग कम मूल्यमा प्रशस्त श्रम क्षमता छ, जसले कम मूल्यमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्छन् । पशुपालन क्षेत्रको विकासको महिला सशक्तीकरणलाई पनि मद्दत पु-याउनेछ । पशुपालन क्षेत्रको विकास हुनु भनेको सीमान्तकृत साना, मझौला मजदुरको आयस्रोत बढाउनु पनि हो, खेतीपातीको त भर छैन ।
अप्रत्याशित बजारको मागले आर्थिक स्रोतविहीन गरिब, सीमान्तकृत कृषक समुदायलाई पशुपालनतर्फ आर्थिक आयआर्जनका लागि प्रोत्साहित मात्र गर्दैन, आफनो कुपोषणबाट मुक्ति पनि दिन्छ । जसको अन्तिम लक्ष्य पूर्ण गरिबी निवारण पनि हो । त्यसका लागि यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले उपलब्ध सम्भावनाबाट फाइदा लिन सकून् अनि सम्भावित चुनौतीको सामना पनि गर्न सकून् । पशुपालन क्षेत्रका अप्ठ्याराहरुको समष्टिगतरुपमा पहिचान गरिनुपर्छ । प्रत्येक भौगोलिक, पर्यावरणीय कृषि जलवायु क्षेत्रमा कुन हदसम्म पशुपालन क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ ? यो कुरा समसामयिक प्रविधिको विकास, संस्थागत संरचनाको विकास, नीतिगत व्यवस्थामा गरिएको परिमार्जन आदिले पशुपालन क्षेत्रमा हाल देखिएका जटिलता समाधान गर्न सकिन्छ ।
विगतमा पशुपालन क्षेत्रको विकास सँख्याकृत थियो भन्नुको अर्थ लक्ष्य अनुसार प्रगति । यो पाराले यस क्षेत्रको दिगो विकास त हुन सकैन बरु उपलब्ध सिमितश्रोतको दुरुपयोग मात्र हुने हो । भविष्यमा पशुपालन क्षेत्रको विकासको लक्ष्य उत्पादक बृद्धिमा हुनुपर्नेछ । यसको लागि दाना आहारको सुलभ उपलब्धता पहिलो शर्त हुनेछ । परिणाम भुमी प्रविधिको हस्तान्तरण नै यस्को मुख्य आधार हुनुपर्नेछ ।
विगत केही समययता पशुपालन क्षेत्रमा सरकारी लगानी घट्दो क्रममा छ । यहाँका लागि यो क्षेत्रलाई पुनर्ताजगी दिन नीतिगत रुपमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । विगतका दिनमा पशुजन्य उत्पादनको व्यवस्थित बजारीकरण त हुन सकेको छैन । यो बिचौलियाका भरमा छोडिएको छ । त्यसैले उत्पादपन थलोदेखि अन्तिम उपभोक्ता र बजारसँग संस्थागतरुपमा कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ ? सोच्ने बेला आएको छ । यसले पशुजन्य उत्पादनको प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिमा सहयोग पु-याउनेछ । साथै सरकारी नीति पशुजन्य उद्योग एवं पशुजन्य उत्पादकका लागि सकारात्मक भएमात्र सीमान्तकृत कृषकका लागि यो फलदायी हुनेछ ।
अब बेला आयो पशुपालन क्षेत्रमा सक्रिय सरकारी, गैरसरकारी निकायलाई अलि चलायमान बनाउुपर्ने । जसले नवीनतम अध्ययन अनुसन्धानका प्रविधि, सेवा, दक्षता एवं प्रभावकारीरुपमा पशुपालक कृषकसम्म सहजरुपमा पहुँच पु-याउन सकोस् । न्यून्तत्तम लागतमा अधिकतम पशुजन्य उत्पादन हुनुका साथै उत्पादकले अधिकतम मूल्य पाउने अवस्था बन्न सकोस् । अनि मात्र हाम्रा पशुपन्छी साँच्चिकै पशुधन मानिनेछन् । र, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सबलीकरण, गरिबी निवारण अनि सुपोषणको आधार बन्नेछन् ।